Isibhedlela iHuashan esixhumene neFudan University - iShenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isibhedlela iHuashan sihambisana neFudan University
IHuashan Hospital ehlangene neFudan University itholakala eShanghai, ehlanganisa indawo ecishe ibe ngama-50 mu. Yaqalwa ngonyaka we-1907. Yisibhedlela esibanzi sezinga lesithathu esihlanganisa umuthi, ukufundisa kanye nocwaningo, kanye neyunithi yomshwalense wezokwelapha eShanghai.
Isibhedlela sinezindlela eziyishumi eziyinhloko: i-neurosurgery, ukuhlinzwa ngesandla, i-Neurology, i-Epidemiology, i-Clinical Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, i-Urology, i-Nephrology, uMnyango Wezinhliziyo, Imaging Medicine kanye neNuclear Medicine, kanye ne-General surgery. I-Orthopedics, ubuhlengikazi, i-laboratory, i-laboratory eyinhloko (ukuhlinzwa ngesandla), i-laboratory eyinhloko (ama-antibiotics), i-endocrinology, i-neurosurgery, ukuhlinzwa ngesandla, i-neurology, imithi yendabuko yaseShayina (isifo samaphaphu), i-dermatology, i-urology, i-nephrology, ukuhlinzwa, i-gastroenterology, i-oncology, ukutheleleka, umuthi wokuhlumelelisa, umuthi wezemidlalo, izithombe zezokwelapha ezingama-20 amakhono abalulekile. Kunezikhungo ezi-7 zokulawulwa kwekhwalithi emtholampilo wasemtholampilo, i-neurology, i-dermatology, i-laser therapy, imithi yenuzi, ukuxilongwa kwezifo emsebenzini kanye ne-neurosurgery, isikhungo sokubambisana sokucwaninga nokuqeqeshwa kwe-1, kanye namalabhorethri angaba ngu-20 abalulekile, izikhungo nezikhungo zocwaningo ezahlukahlukene.
Isibhedlela sinemibhede engu-1216 evunyelwe, ifakwe i-high-definition PET / CT, 3.0intraoperative magnetic resonance, radiosurgery, gamma knife, 256rows of CT, SPECT, DSA, electron beam imaging system (EBIS), color Doppler ultrasound system, ammonia ummese, ummese we-ultrasonic, i-X-knife, i-wave wave lithotripter, i-accelerator eqondile neminye imishini yezokwelapha.
NgoSepthemba 2020, iKomidi Leqembu likaMasipala waseShanghai kanye noHulumeni kaMasipala banquma ukulinikeza isihloko se- "Shanghai Advanced Group ekulweni nobhadane lwe-COVID-19".